Abuuraha QT: Waa IDE ku habboon isweydaarsiga istiraatiijiga ah ee horumarinta Qt. | Laga soo bilaabo Linux
Inbadan Windows, sida MacOS o GNU / Linux kuwa badan baa jira Deegaanada Barnaamijyada Isku-dhafan (Deegaanka Horumarinta Isku-dhafan / IDE), oo loo heli karo Soo saareyaasha si ay u horumariyaan barnaamijyadooda iyo nidaamyadooda, hase yeeshe, in yar ayaa bilaash ah iyo / ama furan, iyo isku dhufasho isku mar ah, laakiin Abuuraha Qt waa mid ka mid ah kuwa yar ee jira.
Sidaa darteed Abuuraha Qt waa a Furan isha IDE iskutallaabta si gaar ah loogu talagalay Soosaarayaasha arjiga Qt, maaddaama ay diiradda saareyso bixinta astaamo gaar ah oo luqaddan ah, oo loogu talagalay barashada fudud iyo hirgelinta.
Isaga oo daliishanaya Rasmi Wiki tan Tiknoolajiyada Horumarinta Qt waxaa lagu tilmaamay:
"Iskudhaf IDE ah (jawi horumarineed oo isku dhafan) oo buuxiya baahiyaha horumarinta Qt. Tani waa qayb ka mid ah Mashruuca Qt. Waxay diiradda saaraysaa bixinta astaamaha ka caawiya dadka cusub ee Qt inay bartaan oo ay si dhakhso leh u bilaabaan inay horumariyaan, waxay sidoo kale kordhisaa wax soosaarka khibradaha Qt ee khibradda leh".
Taasina waxay leedahay astaamaha soo socda:
Tifatiraha koodhka oo taageeraya C +, QML iyo ECMAscript
Qalabka furaha degdegga ah
Iftiiminta qaabeynta iyo lambarka otomaatig dhammaystirka
Xakamaynta adag ee koodhka iyo qaabka markaad qorto
Macnaha macnaha guud
Qaababka iswaafajinaya iyo qaababka xulashada
1 Qt Abuuraha: Ku rakibidda iskutallaabta IDE
1.1 Rakibaadda Terminal (CLI)
1.2 Rakibaadda Sawirka (GUI)
1.2.1 A.- Tallaabada 1
1.2.2 B.- Tallaabada 2
1.2.3 C.- Tallaabada 3
1.2.4 D.- Tallaabada 4
Qt Abuuraha: Ku rakibidda iskutallaabta IDE
In badan Nidaamyada hawlgalka oo bilaash ah oo furan, sida GNU / Linux, on your badan jira Distros, waxaad ku rakiban kartaa isla si toos ah aad ka keyd u gaar ah, laakiin nooc aan hubaal ahayn kan ugu casrisan, iyo xaalado badan oo laga yaabo, xitaa xitaa taxanaha xasilloon ee ugu dambeeyay, taasi waa, taxanaha ah QT5, laakiin Qt4.
Rakibaadda Terminal (CLI)
Qoraalladii hore, sida wicitaan «Xirmooyinka taageerada horumarinta Software-ka ee DEBIAN 10»Waxaan ka faallaynay in isaga, iyo aaladaha kale ee la xiriira, lagu rakibi karo habka soo socda, taas oo ah, adoo fulinaya amarka soo socda:
Si kastaba ha noqotee, gudaha rakibaadda qaybtaada rasmiga ah ee Wiki, waxaa lagu rakibi karaa siyaabo kala duwan, sida laga soo xigtay habab kala duwan by terminal (konsole) taasi waxay ku xirnaan doontaa GNU / Linux Distro loo adeegsaday.
Rakibaadda Sawirka (GUI)
Dhanka kale, hirgelinta ka fudud, a rakibidda garaafka taas oo lagu samayn karo adigoo raacaya nidaamka hoos ku xusan:
A.- Tallaabada 1
Diiwaangelinta iyo galitaanka bogga rasmiga ah ee Qt.
B.- Tallaabada 2
Ka soo dejiso fulinta aad dooratay oo aad uga baahan tahay qaybta soo dejinta ee bogga rasmiga ah ee Qt, labadaba noocyo cusub oo deggan sida noocyo duug ah oo xasilloon.
C.- Tallaabada 3
Orod rakibayaha oo rakibi Qt Abuuraha.
D.- Tallaabada 4
Daahfurka Qt Abuuraha, sahamiya oo u adeegso sida kuugu habboon.
Wixii macluumaad guud ah oo dheeraad ah Abuuraha Qt iyo Tiknoolajiyada Qt waad ka heli kartaa qoraaladeena hore ee la xiriira.
Qt Abuuraha 4.12 mar hore ayaa la sii daayay waana kuwan warkiisa
Nooca cusub ee IDE Qt Abuuraha 4.10.0 ayaa la sii daayay
Suuqa Qt, oo ah bakhaar buugaagta lagu iibiyo ee modules iyo plugins loogu talagalay Qt
Qt wuxuu lahaan doonaa is dhexgal wanaagsan Python iyo Web Assembly
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan Iskuduwaha IDE «Qt Creator», loo maleeyay sida a Isha furan ee IDE si gaar ah loogu talagalay horumariyeyaasha barnaamijyada Qt, maadaama ay diiradda saareyso bixinta astaamo gaar ah oo luqaddan ah, oo loogu talagalay barashada fudud iyo hirgelinta; noqo wax badan dan iyo utility, Dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Abuuraha QT: Waa IDE ku habboon isweydaarsiga istiraatiijiga ah ee horumarinta Qt.
Kani waa tifaftire weyn, waxaan u adeegsaday dhowr mashruuc waana mid dhameystiran. Waad ku mahadsantahay wadaagista.
Ku jawaab Juan Cisneros
Salaan Juan! Waad ku mahadsantahay faalladaada. Waa wax aad u fiican in khibradaada la sheegay IDE-ga ay tahay mid wanaagsan, sidaa darteed waxay u adeegtaa inay talo u noqoto dadka kale, si loogu dhiirigeliyo inay u adeegsadaan.
Ultimaker Cura: codsi aad u fiican oo loogu talagalay diyaarinta moodooyinka daabacaadda 3D
AppFlow, waa adeeg cusub oo sahlaya gudbinta xogta udhaxeysa AWS iyo SaaS